နှုတ်ခမ်း နီမလေးလို့ ဆိုရလောက်အောင် နီရဲ လှပနေတဲ့ မျက်နှာလေးကိုယ် ချပြလိုက်တဲ့ နန်းသီရီမောင် ရဲ့ ဗီဒီယို…. – Shwe Naung
နှုတ်ခမ်း နီမလေးလို့ ဆိုရလောက်အောင် နီရဲ လှပနေတဲ့ မျက်နှာလေးကိုယ် ချပြလိုက်တဲ့ နန်းသီရီမောင် ရဲ့ ဗီဒီယို….
ပရိသတ်ကြီးရေ နန်းသီရိမောင် ကတော့ တိုင်းရင်း သူလေး ဖြစ်ပြီး အမိုက်စား အချိုး ကျကျ ခန္ဓာကိုယ် အလှတရား ပေါ်လွင် စေတဲ့ အလန်းစားပုံလေး တွေနဲ့ ပုရိသတွေ အသည်းနှလုံးကို ဖမ်းစား ထားတဲ့ မော်ဒယ် မလေးဘဲ ဖြစ်ပါတယ် ။
သူမရဲ့ အမိုက်စား ဖက်ရှင်တွေနဲ့ အလန်းစားပုံ လေးတွေ ကတော့ ပရိသတ် တွေ အတွက် ကြွေသွား စေလောက်တာ အမှန်ပဲဖြစ်ပါတယ် ။ ဖြူဖွေးနေတဲ့ သားရည်နဲ့ သွယ်လျ ပြေပြစ်တဲ့ ခန္ဓာကိုယ်လေး တွေကြောင့် လည်း ပုရိသတွေကို ကြွေစေခဲ့ တာဖြစ်ပါတယ်။
နန်းကတော့ သူမရဲ့ ဆွဲမက်စရာ ကောင်းတဲ့ ကောက် ကြောင်း အလှတရား တွေကြောင့် ပရိသတ် တွေကြားမှာ ရေပန်းစား နေလေးဖြစ်ပြီး ဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့ အလှအပ တွေကြောင့် အမြဲအချစ်ပို စေသူလေး ဖြစ်ပါတယ်။သူမကတော့ သာမန်model လေးတစ်ယောက် အဖြစ်နဲ့ အနု ပညာလောက ထဲဝင်ရောက် လာခဲ့ပေမယ့်
သူမရဲ့ကြိုးစားမှု တွေကြောင့် အခု အချိန်မှာ တော့ အားပေးသူ ပရိသတ် အခိုင် အမာ ရရှိလာတဲ့ အနုပညာ ရှင်မလေး တစ်ဦးပဲဖြစ်ပါတယ်။လတ်တလော မှာတော့ ကမ်းခြေ လေးမှာ အလန်းစား ရိုက်ထားတဲ့ အမိုက်စား ဗီဒီယို လေးတွေကို ဖော်ပြထား တာတွေ့ရပါတယ်။
ဗီဒီယိုလေး တွေတိုင်းမှာ နန်းတစ်ယောက် ဆွဲဆောင်မှု ရှိရှိနဲ့ ချစ်ဖို့ ကောင်း နေတာ လည်းဖြစ်ပါတယ်။သူမကတော့ လတ်တ လော လူမှုကွန်ယက် စာမျက်နှာမှာ အမျိုးသား တွေရဲ့ ဝန်းရံခြင်း ကိုခံနေ ရတာဖြစ်ပြီး လူကြိုက် များလာတဲ့ မော်ဒယ်အမိုက် စားလေးဖြစ်ပါတယ်။
ချစ် ပရိသတ်တွေတွက် နန်းရဲ့ ဗီဒီယို လေးတွေကို မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်။
အမိုက်စားကောက်ကြောင်း အလှကို ပေါ်လွင်အောင် မိလွန်းနေ တဲ့ ဖြူသိင်္ဂကျော်…
Mဆိုင်းလုရဲ့ အမိုက်စား ပုံရိပ်လေးများ….